I-PHILOSOPHICAL: UMartin Vrijland
Kuthiwani ukuba i-nanotechnology kunye neengqondo zobuchule zikhokelela ekufeni?
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	13 Julayi 2017	• 8 Comments
Kuthiwani ukuba i-nanotechnology kunye neengqondo zobuchule zikhokelela ekufeni? Kuthekani ukuba transhumanists njengoko Ray Kurzweil Google kunye Michio Kaku (eyaziwa kwi Discovery Channel) afanayo kwaye sinako indawo zonke iiseli ofayo zebhayoloji emzimbeni wethu yi By olunokuveliswa iiseli ukusuka apho iziphako yemfuza ezibangela izifo lokufa, uthando-zahlelwa ? Kutheni [...]
Isenzo sokucoca: ngumthetho ogqwesileyo ovela kwi-hatball ephezulu kaRonald Plasterk!
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	12 Julayi 2017	• 16 Comments
Uyamazi umfundisi onobubele onobubele, oye watshintshwa ngokukhawuleza ngaphandle kwekhompiyutha kunye nesithethi eBuitenhof kuMphathiswa wezeMfundo, iNkcubeko kunye neSayensi phantsi kwekhabhinethi yeBalkenende IV. UConald Plasterk oqaqambileyo kunye noConaldk mhlawumbi uyabonakala ngokubonakala kwakhe ngokubethelela kunye neempumlo. Ngamanye amaxesha unxibe ikhonkco elithandayo kwaye [...]
'I-Horizon Zero Dawn' esuka kwi-Amsterdam yokudlala inkampani uGerrilla Games 1e inyathelo elibhekiswe kwinyani engathandabuzekiyo
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	11 Julayi 2017	• 7 Comments
Iprogram yethelevishini iVPRO Tegenlicht ithumele inkqubo kwi-16 pril 2017 ngesihloko esithi 'Konke kumdlalo'. Igama elikhethiweyo kakuhle, kuba uxwebhu luyimzekelo omhle wendlela umhlaba wonke okhulayo uninzi lwezigidi zoluntu ezilahlekelwa ngayo ekudlaleni imidlalo. Le midlalo iya kuba yinyani kwaye iguquliwe ngokukhawuleza ukusuka 'kumgca', [...]
I-Turkey ne-Iran, ukuhlaselwa ngokwesiprofeto ku-Israyeli kunye nebalazwe yendlela eya kuRhulumente wasehlabathini waseLuciferi
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	27 Juni 2017	• 32 Comments
Ngaphambi koko ndathetha ukuba iziprofeto zonqulo zisebenza njengoluhlobo lwesicatshulwa kwimeko esiphila kuyo. Ndathi kwakhona i-Turkey izalisekisa indima kaMagogi kwaye uMongameli u-Erdogan nguGogi waseMagog njengoko kukhankanywe kwincwadi yeBhayibhile kaHezekile (jonga apha). Ngaphambi kokuba uphume kwaye ucinge: "Awukho [...]
Intanethi, umthi wolwazi, i-Apple kunye nobomi obungunaphakade
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	3 Juni 2017	• 3 Comments
UNicholas Copernicus wabhala ngokwembali yethu kwi-1543 emva koKrestu ukuba iLanga yayiyiziko lezolanga zethu kwaye umhlaba wawuphela nje umhlaba owawujikeleza ilanga. Le ngcamango yayiyikrakra ngeli xesha elibazise ukubhala komsebenzi wakhe omkhulu weenkwenkwezi kunye [...]
Ubudala be-Aquarius, i-New Age kunye neNew World Order
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	kwi-29 Disemba 2016	• 19 Comments
Madam Helena Petrovna Blavatsky ngokwenene ungumsekeli weNguqulelo ye-New Age apho zonke iinkolo ziya kudibanisa kunye nokwakhiwa koRhulumente wehlabathi we-1 yinkqubo enqwenelekayo. Wahamba lonke ihlabathi ukufundisisa zonke iinkonzo. Le nyaniso ngokwayo mayibe ngumqondiso ukuba le ntombi ivela kwimibuthano eyenza kakuhle, kuba [...]
Kutheni unokukhathazeka malunga nakho konke ukungabi nabulungisa kwihlabathi?
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	kwi-11 Septemba 2016	• 2 Comments
Kutheni unokukhathazeka malunga nakho konke ukungabi nabulungisa kwihlabathi? Lo ngumbuzo abantu abaninzi abazibuzayo. Kuloo nto ixutyushwa rhoqo ukuba oku kungena kumandla ambi. Abanye abantu bakholelwa ukuba udale into yakho, ngoko ke ukuba ugxila kukungabi nabulungisa, [...]
Umbuzo oyintloko wenkolo: Ngubani owona oyinyaniso uThixo kunye noSathana?
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	kwi-14 Disemba 2015	• 12 Comments
Kwiimpendulo ezininzi ezivela kubafundi ndibuzwa ukuba kutheni ndithetha kakhulu ngoSathana? Ukuba kukho uSathana, kufuneka kubekho noThixo? Kubafundi abangobu bhsayithi kuphela baya kuba nemibuzo engapheliyo. Ngamava abo mhlawumbi akukho nkulunkulu kukho konke kwaye [...]
Ukutshabalalisa umlingo i-Google ixuba utyalo-mali kunye nokunyaniseka
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	26 Oktobha 2015	• 2 Comments
Kwiveki eveleleyo ndathetha ukuba ndihlala kwihlabathi elithengileyo, apho ndenza inkcazo kwizinto zenzululwazi, njengokuchazwa kwendalo kunye nomtya weetambo (intambo yeetambo) eziphatha ngokuhambelana nekhowudi yekhompyutha (jonga apha). Ndaphinda ndithethe ngeendlela ezinokulinganisa ngayo. Oku kuqondwa kakuhle ngo- [...]
Ubuninzi beenyawo, ukufaniswa kwesoftware, ukuqonda okanye umphefumlo. Yintoni eyinyani?
Kufakwe kuyo PHILOSOPHICAL	by UMartin Vrijland	20 Oktobha 2015	• 27 Comments
Kwinqaku malunga nolwimi lwesiHebhere, ndacacisa indlela indalo iphela ngayo malunga nokufaniswa kwesofthiwe. Andiyena owokuqala kunye noyedwa kuphela omele abize oko, akukho nongcali ye-astrophysicist kunye nomzuzwana weNobel umphumeleli uGeorge Smoot unomdla ngalo mbuzo. Nangona uthi kule ngxelo ye-TED yokuba 'ulula [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.441.457
Ilanga op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
jupasch op Eyona ngcinga inkulu: Leliphi ilizwe esiya kulakha emva kwentlekele ye-corona?
SandinG op I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?